Fanavaozana raha mbola sonia ny iOS 9.0.2 | Vaovao IPhone
Raha mbola tsy nametraka ianao iOS 9, na inona na inona antony dia mieritreritra ny hanao izany ianao ary te-hivadika am-ponja, manavao raha mbola azonao atao. Mba hametrahana kinova iOS dia takiana sonia dizitaly ny angoninay iPhone, iPod na iPad avy amin'ny lohamilin'i Apple. Raha tsy misy an'io sonia nomerika io dia tsy ho afaka hametraka izany firmware izany intsony izahay. Hatramin'ny vao tsy ela akory izay, Apple dia nijanona nanasonia ilay kinova taloha an'ny iOS adiny iray taorian'ny namoahana ilay vaovao, saingy niova izy io vao haingana mba hahazoana antoka fa tsy misy hadisoana matotra ao amin'ilay kinova vao navoakany.
Izany dia milaza fa misy kinova roa an'ny iOS amin'izao fotoana izao manasonia hatrany izy ireo: ny iOS 9.1 farany indrindra, ary ny kinova taloha, iOS 9.0.2. iOS 9.1 dia tsy mora tohanan'ny jailbreak intsony avy any Pangu, ka raha te hampiasa kinova jailbroken an'ny iOS 9 ianao dia tokony ho iOS 9.0.2. Io kinova an'ny iOS io dia mbola vita sonia ihany, saingy tsy fantatra ny fotoana hijanonany. Raha te hahalala raha mbola misy sonia iOS (amin'ity tranga ity 9.0.2) dia vita sonia dia tsara kokoa ny mitsidika ny pejy ipsw.me. Raha eo ambanin'ny "Apple Signing Status" dia mahita "V" maitso isika dia mbola afaka mametraka an'io kinova io ihany.
Raha hametraka kinova izay tsy ny iOS vao haingana, dia tsy maintsy hataontsika izao manaraka izao:
Manao backup izahay.
Misintona ny kinova iOS izay mifanaraka amin'ny fitaovantsika izahay. Azontsika atao izany amin'ny tranokala ipsw.me ihany
Mampifandray ny iPhone, iPod na iPad amin'ny solosaina amin'ny tariby isika.
Ao amin'ny iTunes, mifantina ny fitaovantsika izahay ary mankeny amin'ny kiheba famintinana.
Tsindrio ny bokotra Alt amin'ny Mac na Shift amin'ny Windows ary kitiho ny fanavaozana (na avereno).
Ao amin'ny varavarankely izay misokatra, dia mitady ilay rakitra .ipsw izay alaina ao amin'ny dingana 2 izahay.
Miandry ny hametrahana ny rafitra izahay ary hamerina ny backup raha irinay. Manoro hevitra ny hanao fametrahana madio aho.
Raha efa eo amin'ny iO 9.1 ianao ary mieritreritra fa very ny zava-drehetra dia diso ianao. Raha mbola sonia ny iOS 9.0.2 dia azonao atao ny mihena. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny manaraka ny fampianarana Ahoana ny fomba fihenam-bidy avy amin'ny iOS 9.1 mankany amin'ny iOS 9.0.2 izay nataon'i Miguel roa andro lasa izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Raha te-jailbreak iOS 9.0.2 ianao dia manavao raha mbola azonao atao
Miaraka amin'ny fahombiazan'ny iOS 9.1, efa nandiso fanantenana ahy ny jailbreak. Iray S2
fabielca dia hoy izy:
Namaky jailbreak ny iPhone 4S mahery aho, 🙂, ary hatramin'ny nandefasan'i Pangu ny fonja ……. Isaky ny mametraka aho dia esoriko… ..mandefa SMS iraisam-pirenena 0,60 euro + VAT ny rafitra.
Namaky ny lahatsoratrao maro momba ny zava-tsoa ao amin'ny fonja aho, ny zavatra tsara ary ny zavatra ratsy, ... ary tsy nisy namaky ilay SMS mandeha ho azy tsara ho an'ny iray tamin'izy ireo.
Vao avy nanavao ny IOS 9.1 aho ary efa manana ny hafatra SMS voaloa sy voaloa amin'ity laharana 447 *** 985246 ity, ity dia fonja fanavaozana miaraka amin'ny 9.0.2 ary ankehitriny mametraka 9.1 sy SMS roa € 0,60 + VAT aho …….
EFA MISY MANAM-PIAINANA ??
Io no zavatra niainako farany tany am-ponja, raha ny marina dia mampihomehy ity ary tsy mitondra mankaiza akory, afa-tsy ny fampiroboroboana ny saurik, ny Sinoa ao Pangu ary angamba, angamba…. Iza ao amin'ity forum ity…
Mamaly an'i fabielca
Salama, Fabielca. Raha ny fahalalako azy dia manontany anay foana izy alohan'ny handefasana izany SMS iraisam-pirenena izany. Koa satria tsy ampiasaiko (miaraka amin'ny nomeraon-telefaona), nofoanako izy. Raha te hampiasa iMessage na FaceTime aho dia ataoko amin'ny kaonty mailaka.
Inona no resahin'izy ireo?
Salama Miguel. Rehefa mampihetsika iPhone ianao, ny zavatra voalohany ataony dia ny mandefa SMS iraisampirenena hamelomana ny iMessage sy FaceTime, izay mety misy vidiny. Alohan'ny hanaovana izany dia manatona anay. Farafaharatsiny, raha ny amiko (ary heveriko fa an'i Fabielca) dia toy izany foana.
Inona ny sms iraisam-pirenena lazainao amiko? Efa nandritra ny taona maro aho no namaky tranomaizina, nanao tamin'ny faha-6 sy sms an'i Nada de Nada fotsiny.
Mania tsy mitombina tokoa manandrana manala baraka ny jailbreak. Hatramin'ny nivoahan'ny iOS 9 sy ny jailbreak dia tsy vitako ny mijanona mamaky an'ity karazana hadalana manohitra ny jailbreak ity amin'ny pejy vaovao momba ny paoma.
Avy amin'ny iOS 9.1 tamim-pahatsorana aho fa tsy dia hita loatra ireo fanovana, miresaka amin'ny tenako amin'ny iphone 5s aho, midina amin'ny 9.0.2 aho alohan'ny hijanonanan'izy ireo sonia satria azoko ny zava-drehetra omen'i 9.1 ahy amin'ny jailbreak mahery vaika! !! !
Valiny tamin'i Daniel Martínez
Misy mahalala ve raha miasa tsara ny iapfree na iapcrazy, ary amin'ny repo iza ????
Fantatrao ve raha mbola manao sonia 9.0.2 izy ireo?
Salama Erick. Tsy vita sonia intsony ny iOS 9.0.2.
Mirary ny soa indrindra.
Mitranga amin'ny olon-kafa fa ny finday dia haverina tsindraindray amin'ny alàlan'ny fanapahana ihany? Tsy haiko raha tsy mahomby aho sa raha nataoko indroa satria tamin'ny voalohany dia nisy lesoka tamiko.
Neily dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko indraindray, miverina irery izy io, hamerina aho izao fa 9.0.2 dia mbola azo atao sonia hanao jailbreak indray ary hijery raha voavaha io olana io, izay mahasosotra
Mamaly an'i Nile
Hevitra IPhone 7 miaraka amin'ny eo aloha ho efijery